LibreWolf, forogo yeFirefox ine tarisiro pane kuvanzika uye chengetedzo | Linux Addicts
LibreWolf, forogo yeFirefox ine tarisiro pakuvanzika uye kuchengetedzeka
Kana uri kutsvaga browser dandemutande zvinokupa kuchengeteka zvese kana uchiishandisa pamwe chete ne kuchengetedza data rako, ndinogona kukuudza kuti LibreWolf ndeimwe yeaya mabhurawuza ewebhu anogona kukupa izvo nezvimwe.
LibreWolf inovakazve Firefox umo nhamba huru yekuchinja inoshandiswa kuvandudza kuchengetedzwa kwevashandisi uye kuvanzika. Chirongwa ichi chiri kugadzirwa nenharaunda yevanofarira.
1 About LibreWolf
2 Maitiro ekuisa LibreWolf paLinux?
Iyo browser pachayo yakavakirwa pahwaro hweFirefox, asi akasiyana maficha anowedzerwa uye anobviswa anoita kuti browser iyi ive yakasiyana, Pakati pemisiyano mikuru pakati peFirefox neLibreWolf, zvinotevera zvinomira pachena:
Iyo kodhi yakabatana neye telemetry kutapurirana inobviswa, ita zviedzo kuti ugone kugonesa kuyedza kune vamwe vashandisi, ratidza kuisa ad mukurudziro paunenge uchitaipa mubhawa kero, ratidza kushambadza zvisina basa.
Pese pazvinogoneka, dzima mafoni kumasevha eMozilla uye uderedze kubatanidza kumashure.
Yakabviswa akavakirwa-mukati maplugins kuti atarise zvigadziriso, tumira mishumo yekuparara, uye ubatanidze nePocket sevhisi.
Shandisa injini dzekutsvaga dzinochengetedza zvakavanzika uye havateveri zvido zvevashandisi. Kune rutsigiro rweDuckDuckGo, Searx, uye Qwant injini dzekutsvaga.
Zvinosanganisira ad blocker uBlock Origin mune yekutanga package.
Kuvapo kwe firewall yekuwedzera-ons, iyo inorambidza kugona kumisikidza network yekubatanidza kubva kune plug-ins.
Tichifunga nezve kurudziro yakagadziridzwa neArkenfox purojekiti yekusimbisa kuvanzika uye kuchengetedzeka, pamwe nekuvharira mikana inobvumidza kungozivikanwa kwebrowser.
Zvirongwa zvekusarudza zvinoguma nekuvandudzwa kwekuita.
Kukurumidza chizvarwa chezvigadziriso zvichibva pane huru Firefox kodhi base (inovaka yeitsva shanduro dze
LibreWolf inogadzirwa mazuva mashoma mushure mekutangwa kweFirefox).
Inodzima zvinhu zvemuridzi nekumisikidza kuona DRM (Digital Right Management) zvakachengetedzwa.
Kuvhara nzira dzisina kunanga dzemushandisi, WebGL inovharwa nekusarudzika. Zvakare zvakaremara nekusarudzika IPv6, WebRTC, Google Safe Browsing, OCSP, Geolocation API.
Vakai sisitimu yakazvimirira: Kusiyana nemamwe mapurojekiti akafanana, LibreWolf inovaka inozvigadzira uye haigadzirise Firefox kunze kwebhokisi inovaka kana kudarika marongero.
LibreWolf haina hukama neFirefox profile uye yakaiswa mune imwe dhairekitori, ichibvumira kuti ishandiswe mukufanana neFirefox.
Kudzivirirwa kwezvirongwa zvakakosha kubva pakushandurwa. Settings inokanganisa chengetedzo nekuvanzika inotorwa mu librewolf.cfg uye policy.json mafaera uye haigone kuchinjwa kubva pamapulagi, zvigadziriso, kana browser pachayo. Nzira chete yekuita shanduko ndeyekurongedza zvakananga librewolf.cfg uye policy.json mafaera.
Sarudzo seti yeakapupurirwa LibreWolf plugins inopihwa, kusanganisira maplugins akadai saNoScript, uMatrix, uye Bitwarden (password maneja).
Maitiro ekuisa LibreWolf paLinux?
Kune avo vanofarira kukwanisa kuisa iyi web browser pamasisitimu avo, vanogona kuzviita nekutevera mirairo yatinogovera pazasi.
Ndivanaani vashandisi veArch Linux, Manjaro, Arco Linux kana chero kumwe kunobva kugovera yeArch Linux, vanogona kuisa zvakananga kubva kubhurawuza kubva kuAUR repos. Kuti vaite izvi, vanofanira kunge vane wizard yakaiswa uye repository inobvumira pacman.conf file yavo (/etc/pacman.conf).
Kana kuti vanogonawo kuisa ne:
Kana iwe uri debian mushandisi kana chero kumwe kugovera kwakavakirwa pane izvi, chaunofanira kuita kuvhura terminal uye mairi iwe unonyora zvinotevera:
Kana zvakadaro avo vanofarira kushandisa Flatpak mapakeji, Unogona kuisa bhurawuza uchishandisa nzira iyi nekunyora murairo unotevera mune yako terminal:
Pakupedzisira, imwe yekuisa nzira ndeye kuburikidza neAppImage package yakapihwa uye iyo inogona kuwanikwa kubva kune inotevera link. Mariri ivo vanofanirwa kudhawunirodha pasuru yekupedzisira vhezheni inowanikwa (Panyaya yekunyorwa kwechinyorwa ishanduro 94 uye iyo ichatorwa semuenzaniso).
Iwe unogona kuwana package kubva kune terminal nekunyora:
Wobva wapa mvumo yekuita ne:
Uye iwe unogona kumhanya browser ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreWolf, forogo yeFirefox ine tarisiro pakuvanzika uye kuchengetedzeka
Ini ndinosarudza Palemoon kane chiuru, iyo inotokupa zvese izvi nezvimwe uye iri hombe, yakagadzikana purojekiti ine kuenderera mberi. Izvi, sezvaunotaura, vanofarira 4, hongu, vanotendwa uye vanozivikanwa nekuda kwekuedza kwavo, asi hachisi chirongwa chinoenderera nekuti chakaoma mitezo zvachose pane dzimwe nguva uye kana iwe usingazvitarisire, chinonyangarika husiku.
Pindura kune mejorpalemoon